စမ်းသပ်ခြင်း & Navigation ဆော့ဝဲ GPS | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျီပီအက်စ် & ခရီးသွား Apps ကပ » GPSTest
GPSTest APK ကို
GPSTest သင့်ကိရိယာ၏အမြင်များတွင်ဂြိုဟ်တုအဘို့ကို real-time သတင်းအချက်အလက်ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပလက်ဖောင်းအင်ဂျင်နီယာများ, developer များ, နှင့်အာဏာအသုံးပြုသူများအတွက်တစ်ဦးကအရေးပါသောအ Open-source ကိုစမ်းသပ်ခြင်း tool ကို, GPSTest လည်းသူတို့ရဲ့ GPS / GNSS သို့မဟုတ် working.Supports Dual-အကြိမ်ရေမဟုတ်ပါဘူးအဘယ်ကြောင့်နားလည်သဘောပေါက်အတွက်အသုံးပြုသူများအကူညီနိုင်ပါတယ် * GNSS များအတွက်:
• GPS စနစ် (ယူအက်စ်အေ Navstar) (L1, L2, L3, L4, L5)
•လီလီယို (ဥရောပသမဂ္ဂ) (E1, E5, E5a, E5b, E6)
• GLONASS (ရုရှား) (L1, L2, L3, L5)
• QZSS (ဂျပန်) (L1, L2, L5, L6)
•ကြီးမှာ Beidou / COMPASS (တရုတ်) (B1, B1-2, B2, B2a, B3)
•အမျိုးမျိုးသောဂြိုဟ်တု-based တိုးပွားစနစ်များ SBAS (ဥပမာ GAGAN, Anik F1, က Galaxy 15, Inmarsat 3-F2, Inmarsat 4-F3, SES-5) (L1, L5)
* dual-အကြိမ်ရေ GNSS device ကိုဟာ့ဒ်ဝဲထောက်ခံမှုနှင့် Android 8.0 Oreo သို့မဟုတ်မြင့်မားသောလိုအပ်သည်။ https://medium.com/@sjbarbeau/dual-frequency-gnss-on-android-devices-152b8826e1c မှာပို။
•ဆေးထိုးအချိန်ဒေတာများ - တစ်ကွန်ယက်အချိန်ပရိုတိုကော (NTP) server ကနေသတင်းအချက်အလက်တွေသုံးပြီးပလက်ဖောင်းသို့ GPS စနစ်အဘို့အချိန်အကူအညီများ data တွေကိုထိုး
•ဆေးထိုး XTRA ဒေတာများ - (gpsOneXTRA အပေါ်အသေးစိတ် http://goo.gl/3RjWX ကိုကြည့်ပါ) တစ်ဦး XTRA server ကိုမှသတင်းအချက်အလက်သုံးပြီးပလက်ဖောင်းသို့ GPS စနစ်အဘို့အ XTRA အကူအညီများ data တွေကိုထိုး
•ဒေတာရှင်းလင်း Assist - NTP နှင့် XTRA ဒေတာအပါအဝင်, GPS, များအတွက်အသုံးပြုအားလုံးအကူအညီများ data တွေကိုရှင်းလင်းရေး (မှတ်ချက်: အကယ်. သင်သည်သင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်ကျိုးဂျီပီအက်စ်ကို fix ဤ option ကို select လုပ်ပါလျှင်, GPS, အလုပ်လုပ်ဘို့နောက်တဖန်သင်တို့ကို '' Injection အချိန် '' ရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့် '' ဆေးထိုးစေခြင်းငှါ XTRA '' ဒေတာ)
•က Settings - ဂျီပီအက်စ် updates များကိုအကြား startup, နိမ့်ဆုံးအချိန်နှင့်အကွာအဝေးပေါ်အလင်းနှင့်မှောင်မိုက် themes များအကြားပြောင်းလဲမည်ပြောင်းလဲမှုမြေပုံ tile ကိုအမျိုးအစား, Auto-စတင် GPS စနစ်အပေါ်မျက်နှာပြင်ကိုစောင့်ရှောက်။
Github အပေါ် open-source:
အဟောင်းကိုထုတ်ပြန်ပြောကြားချက်များလွမ်းဆွတ်? Google ကသင့်ရဲ့ device ကိုပေါ်န်ဆောင်မှုများ Play ရှိသည်မဟုတ်လော ဤနေရာတွင်ဟောင်းဗားရှင်း Download:
သငျသညျမြေပုံ tab ကိုအပေါ်မြေပုံကိုမြင်ချင်လျှင်, သင် Google Play ဝန်ဆောင်မှုများကိုထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့အပြင်က F-Droid အပေါ်ရရှိနိုင်ပါ:
သင့်ရဲ့ GPS စနစ်၏ * စစ်မှန်တဲ့ * တိကျမှန်ကန်မှုကိုတိုင်းတာရန်လိုပါသလား?
ဂျီပီအက်စ် Benchmark ထုတ်စစ်ဆေး:
•ကြီးမှာ Beidou B1C လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြိမ်နှုန်း - B1C ယခု CF ကော်လံကြီးမှာ Beidou ဂြိုဟ်တုအဘို့မှန်ကန်စွာပြသ
နောက်ခံ GNSS အသုံးပြုမှုကိုပိတ်ခြင်းများအတွက်• Option ကို - enabled အကယ်. app ကိုစွန့်ခွာရန်အ Home နဲ့ multitasking ခလုတ်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ, GNSS ကို turn off ပါလိမ့်မယ်
• Bug ပြုပြင်မှုများ - http://bit.ly/gpstest-releases တွေ့မြင်
2.08 ကို MB
dual Apps ကပ
wifi / မိုဘိုင်းဒေတာပြောင်းလဲမည်
ဂျီပီအက်စ်ပြင်ဆင်ချက်: ဂျီပီအက်စ် ...